Kooxda Tottenham oo u magacaawday tabare Nin dunida cayaaraha si weyn looga yaqaano. – Al-Hurriyah
Muqdisho, November 20, 2019, (Alhurriyah Sports): Kooxda Tottenham oo u magacaawday tabare Nin dunida cayaaraha si weyn looga yaqaano. Kooxda totenham ayaa barteeda soo dhigtay kuna xaqiijisay wararka la isla dhexmaray ee ahaa in tababare Jose Mourinho loo magacaabay inuu leyliyo kooxdaasi.
Tottenham ayaa xaqiijisay in The Special One uu kusoo laabtay Premier League iyo Jose Mourinho uu noqonayo tababaraheeda cusub ayna siisay heshiis soconaya ilaa 2023.
Warkaan ka yimid Tottenham ayaa imaanaayo maalin kadib markii tababaraheedii hore Mauricio Pochettino uu katagay shaqada ayada loo aaneynaayo hoos udhaca kooxda kuyimid xagaaygaan.
Tababaraha loo doortay Tottanham Mourinho ayaa soo leyliyay kooxda Manchester United ilaa December 2018 ayada wixi ka dambeyayna la waayay. Mourinho ayaa 3 jeer ayaa ku guuleystay horyaalka Premier League.
Kusii biiridda Mourinho ee kooxda Tottenham maxa kusoo kordhin doontaa kooxda iyo horyaalka Premier League dalkaasi?
Aqriste Noo fariintaada dhanka hoose.